Somaliland Oo Ka Hadashay Qorshaha Ay Soomaaliya Kula Soo Wareegayso Maamulka Hawadda | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Somaliland Oo Ka Hadashay Qorshaha Ay Soomaaliya Kula Soo Wareegayso Maamulka Hawadda
Hargaysa (SDWO.com): Xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland ayaa markii horaysay ka hadashay qorshaha ay ku doonayso dawladda federaalka Soomaaliya in ay kula soo wareegto maamulka Hawadda, kaas oo ay qarmadda midoobay gacanta ku hayso.
Wasiirka duulista hawadda iyo gaadiidka cirka Somaliland Farxaan Aadan Haybe, ayaa sheegay in aanu wax suurto-gelaya ahayn isku-dayga ay dawladda Soomaaliya ku doonayso in ay sifo khaldan kula soo wareegto maamulka Hawadda.
Wasiir Farxaan, oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa waxa uu tilmaamay in haddii ay dawladda Muqdisho sii wado qorshaha ay ku rakibayso qalabka maamulka Hawadda in Somaliland-na ay diyaar u tahay in ay rakibato qalabka ay ku maamulayso hawadeedda.
Isagoo arrintaas ka hadlayayna waxa uu yidhi “Waxaan maqlaynay qoladda Soomaaliya in ay wadaan isku-day ay ku doonayaan in ay maamulka hawadda kula wareegaan, isku-daygaasina wax suurto-gelaya ma aha. Xalka qudha wuxuu yahay, sifo kastoo la isku dayo iyo qalab kastoo la rakibo, haddii aan wada hadal laga gelin suurto-gal ma noqonayo.
Inagu-na (Somaliland) wixii aanu hawadayadda ku maali lahayn waanu haysanaa. Iyagu-na (Soomaaliya) haddii ay doonayaan hawadoodda in ay maamushaan waxba kama qabno. Laakiin, wax kastoo isku khaldaya in ay noqoto ama dhacaan oo aan wada hadal laga gelin”.
Wuxuu sheegay wasiirku in Somaliland ay rejo ka qabto in wada hadaladii u socday Somaliland iyo Soomaaliya ee dhinaca maamulka Hawadda ay dib u bilaabmaan, balse haddii taas la waayo in qolo wailba ay u madax banaan tahay in ay hawadeedda maamulato.
“Runtii rejo weyn ayaanu ka qabnaa, waanan ku niyad-sanahay in wada hadallo wanaagsan oo la isku af-gartaa ay bilaabmaan. Haddii ay wada hadaladu dib u bilaabmi waayaan oo taasi ay dhici waydo, waxaa khasab ah in haddii ay dhamaato mudadda kala-wareega ah ee ICAO loo diyaariyay in ay mashruuca ku fuliso, ee dhamaystirka sanadka 2018-ka in golaha Amaanka oo hay’adda ICAO uga wakiil tahay go’aan ka gaadho.
Taasina waxay keeni karaysaa in cid kale lagu wareejiyo hawadeenna, ha noqoto wadamadda jaarka ama wadamadda kale ee loo arko in ay muhiim u yihiin. Haddii ay sidaasi dhacdo taasi waxay dhalin kartaa in muddo dheer gacanta Soomaalida ay ka maqnaato maamulka Hawadoodu” ayuu yidhi wasiirka duulista Somaliland.
Isagoo hadalkiisa sii watayna waxa uu yidhi “Waxaanu rejo weyn ku qabnaa in wada hadal la isugu yimaado, oo la is-la eego suurta-galnimadda ah in lawada maamulan karayo, oo ah tii hore loo waday ee heshiiskii Istanbul iyo Turkiga lagu waday. Haddii ay taasi suurtoobi waydo, qolo waliba (dawlad waliba) nidaamkeedda iyo qorshaheedda way u madax banaan tahay, wax is-dhex gelayana ma aha. Somaliland ahaan anagu xagayaga kama rejo xumin, waxaanan aamin sanahay in ay gacan bed-qabta oo amaan ah ku jirto, heshiiskuna sidaas yahay”.
Dhinaca kale wasiirka ayaa digniin u dirtay shirkadaha diyaaradaha ee aan ruqsadda ogolaanshiyaha ka haysan wasaaradda duulista in aanay ka soo degi Karin garoomadda diyaaradaha ee Somaliland, isla markaana aan loo ogolaan doonin.
Waxaanu sheegay in aanay damaanad qaadi Karin haddii ay isku dayaan in diyaaradaha qaar isku dayaan in ay ka soo degaan garoomadda diyaaradaha Somaliland, isagoo tilmaamay in Somaliland ay u madax banaan tahay in ay maamusho xuduudaheeda Cirka, dhulka iyo Baddaba.
Waxaanu yidhi “Waxaan ku wargelinaynaa dhamaan shirkadaha ama Nairobi ha joogaan ama halkan ha joogaan diyaarad aan ruqsad ka haysan wasaaradda duulista, in aan loo ogolaan doonin in ay ka degto garoomadda diyaaradaha Somaliland, kamana soo degi karto. Go’aankaasi oo hore u jiray, waanu sii adkaynaynaa”.
“Waxaan u sheegayaa shirkadaha diyaaradaha in aanaan damaanad qaadaynin amnigoodda iyo bed-qabkoodaba, haddii shirkadaha qaar isku dayaan in ay ka soo degaan garoomadda diyaaradhaa ee Somaliland.
Waanay u madax banaan tahay jamhuuriyadda Somaliland in ay go’aamo ka soo saarto xadkeeda Hawadda, Badda iyo Berigaba”ayuu yidhi wasiir Farxaan.